Photogenic ဖြစ်စရာနေရာများနဲ့ အလန်းစား စားသောက်ဆိုင်လေး “The Bar Burdubai”❤️❤️ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » Photogenic ဖြစ်စရာနေရာများနဲ့ အလန်းစား စားသောက်ဆိုင်လေး “The Bar Burdubai”❤️❤️
Photogenic ဖြစ်စရာနေရာများနဲ့ အလန်းစား စားသောက်ဆိုင်လေး “The Bar Burdubai”❤️❤️
Posted by Shar Thet Man on Aug 6, 2018 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Travel |2comments
ဒီတစ်ပတ် ညဘက်Chill ချင်နေတာ ဘယ်ဒိုးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် The Bar Burdubai ကညီမလေးတစ်ယောက်က လာစားပါဖိတ်ပါတယ်လှမ်းဖိတ်တာနဲ့ အရင်ထဲက ကိုယ်လည်းသွားချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဆိုတော့.ဒီတစ်ပတ်တော့ သွားမယ်ကွာဆိုပြီး ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နေရာလေးက UFL ဘက်ကလာရင် အင်းလျားလမ်းရောက်ရင် ညာဘက်ကွေ့ပြီး ခေမရ်ဆိုင်မရောက်ခင်ဘေးက လမ်းထဲဝင်ပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှ MoMoKo ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ့ရင် Heineken ဆိုဒ်ဘုတ်ဘေးကလမ်းလေးထဲဝင်ပါ။ လျှောက်လမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်လာရင် အနောက်ဘက်နားလောက်မှာ The Bar BurDubai ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၀င်ဝင်ခြင်း ညာဘက်မှာ gardenလေးရှိတယ်။အေးအေးဆေးဆေး ခြံထဲထိုင်ချင်ရင်တော့ အဲ့မှာထိုင်လို့ရပါတယ်။ နေပူ၊မိုးရွာမှာ မစိုးရိမ်နဲ့နော်၊ အမိုးလေးနဲ့အေးဆေး Ro လို့ရတယ်။ ☘️
ဒါမှမဟုတ် စားရင်းသောက်ရင်း Djနဲ့ မြူးချင်လား၊ ဒူဘိုင်းရောက်သွားသလိုခံစားချင်ရင်တော့ စားသောက်ခန်းထဲမှာထိုင်ပါ။ မွန်လေးက အဲလိုလေးခံစားချင်တော့ ညဘက်သွားလိုက်တယ်။ အထဲမှာ Djနဲ့ သီချင်းတွေဖွင့်၊ lighting တွေနဲ့၊ smoking(အငွေ့အပျော့စား) လေးတွေနဲ့ တကယ့်ကို bar အကောင်းစားလေးရောက်သွားသလိုလို…. အဟုတ်ကြီး ဒူဘိုင်းရောက်နေသလားတောင်ခံစားရပါတယ်။ အလှယူဆောင်းပြီး ဓါတ်ဖမ်းလို့ရတဲ့ အီဂျစ်ဦးထုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ..
အလား…ကလီရိုပက်ထရာ မွန်လေးကိုဖြစ်ရော။ ထိုင်ခုံလေးတွေနဲ့ အခန်းတွင်း ပြင်ဆင်ထားပုံကလည်း တကယ့်ကို Arabic Style နဲ့ လုပ်ထားလို့ မြန်မာပြည်မှာ ပထမဦးဆုံး အလန်းစား bar လေးပါပဲ။
view ကောင်းကောင်းနဲ့ အေးဆေး ဇိမ်နဲ့ နားအေးပါးအေး စားချငိရင်လည်း Garden ထဲမှာအထပ်မြင့်နေရာရှိပါသေးတယ်။ အဲမှာသယ်ရင်း မိတ်ဆွေနဲ့ စကားစမြည်လေးပြောကြ၊ရယ်ကြပေါ့။ 
ဒီလ သြဂုတ်လအတွက်တော့ ရှူးရှဲ menu buffet promotion လေးရှိပါတယ်။ သူကတစ်ယောက်ကို အ၀စား (၁၀၀၀၀)ပါ။ menu ကိုပုံထဲမှာ ကြည့်လိုက်နော်။ အစားအသောက်တွေကို အီမနေအောင် အစပ်ကလေးနဲ့လုပ်ထားပြီး စားနေရင်း ချွေးထွကိသံယိုမဖြစ်အောင် မိုးရာသီအေးအေးလေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ အစပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသတငိးပါ။
အသောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဘီယာက Free flow နော်။ buffet အပါဆို သူက (၁၅၀၀၀)ထဲရယ်။
Service ပိုင်းက​တော့ အရမ်းအရမ်းကို ​​ကျေနပ်​အားရစရာပါ ဒီလို ဘူ​ဖေးမှာwaiter​တွေရဲ့ ဝန်​​​ဆောင်​မူ့က ဆိုင်​​တော်​​တော်​များများမှာမ​တွေ့ရတဲ့ ဝန်​​ဆောင်​မူ့အပြည့်​နဲ့ပါ..☺️☺️
မွန်လေးဆိုဟင်းပွဲ ၉ ပွဲကို ဟိုဟာလေးစားလိုက်၊ ဒီဟာလေးစားလိုက် နဲ့ကြာတော့ စပ်လို့စပ်မှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ Fancyဆေးထိုးအပ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ cocktail လေးသောက်လိုက်နဲ့( ငွေထပ်ပေးရန်လို) ဒူဘိုင်းရောက်သွားသလို ဖီးလ်ဖြစ်ပြီး သာယာနေပုံများ ပုံထဲတွေမှာသာ ရှိုးလိုကိပါကုန်။ 
စားခဲ့တဲ့ လျှာလည်သွားတဲ့အစားအသောက် ၉ မျိုးကို ပြောပေးမယ်နော်။
အများကြီးပါတယ်။ အရမ်းမစပ်​ပဲ အာလူး​ကြိုက်​သူ​တွေအတွက်​ မိုး​အေး​အေးမှာဘီယာလေးနဲ့မြည်းလိုက်​ရရင်ဖြင့်​ အရမ်းအကြိုက်​​တွေ့သွားမှာပါ။珞
အ​ရောင်​​လေးဆန်းပြီး ​ခေါက်​ဆွဲစားရင်​အီတယ်​ဆိုတဲ့သူ​တွေအတွက် tryကြည့်​ချင်စရာ ဖြစ်မှာပါ။
သူလေးလည်းတမျိုးမိုက်နေပြန်ရော။ ၀က်ဂုတ်သားလေးတွေနဲ့ ထမင်းနဲ့ရောကြော်ထားတာလေ။ အထူးအဆန်းလေး။
သူလေးကလည်း ဂဏန်းအသားတွေကို မအီရအောင် သရက်သီးလေးနဲ့ လုပ်ထားပုံလေးကလည်း ခံတွင်းတွေ့စေမှာပါ။
ကြက်ခြေထောက်သုပ်ဆို အရမ်းကြိုက်လို့..ဒီBar Burdubai လည်းထပ်စားကြည့်တာ သူကပိုပြီး အစပ်တည့်နေလေရဲ့ ။
ဒါ​လေးထူးဆန်းတယ်​ဆိုပီးမှာကြည့်​တာ တကယ့်​ကိုအရသာရှိတာပဲ။ကြက်​သားကင်​​လေး​ပေါ် သရက်​သီး​ထောင်း​လေးတင်​စားလိုက်​ရင်​ဖြင့်..စာရေးနေရင်း သွားရည်တောင်ပြန်ကျလာပြီနော်။
ရူးရှဲ menu စားပြီး စပ်​​နေလည်း ပူစရာကိုမလိုပါ။ အချိူတည်းရ​အောင်​ သာကူကျိူကို free ချ​ပေးသေးတာ..ကဲ..ဘယ်လောက်မိုက်လေသလဲ။ အကုန်
perfect ဖြစ်အောင်၊ စားသုံးသူစိတ်ကျေနပ်အောင် အစားအသောက် အစကနေအဆုံး အကုန်ပြင်ဆင်ပေးထားတာနော်။
အမှန်ကလေ ဟင်းပွဲ ၁၈ ပွဲစလုံးကို အကုန်စားသင့်တာ။ ၁၀၀၀၀ ပဲကျတာလေနော်။ စုံစုံလင်လင်နဲ့ လေ…ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူတွေက..ပင်လယ်စစားပေါ့၊အသားစားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေက..အသားစားပေါ့။ ဘီယာကြိုက်တတ်တဲ့
သူတွေကလည်းက ဘီယာလေး Free flow အ၀ သောက်၊ အမြည်းလေးစား၊ မွန်လေးဆို သယ်ရင်း၂ယောက်ထဲလာတာတောင်စားလိုက်၊သောက်လိုက်၊
စကားတွေပြောလိုက်နဲ့ အပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့တာ..အဖွဲ့တောင့်တယ်ဆို..တကယ်ကိုသွားသင့်ပြီး အစားအသောက်နဲ့ relax လုပ်သင့်တဲ့နေရာလေးပါ။
Menuထဲမပါပဲ Bing su cocktail​လေးရှိပါတယ်​။ Try ချင် tryခဲ့ပေါ့။ ပုံမှာပြပေးထားပါတယ်။
ဒီဆိုင်မှာ Non Nicotine Shisha တောင် ရတယ်ဆိုပဲ။ သွားစားတဲ့အခါ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ဆွဲခဲ့ပေါ့။
ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုက cocktail အစုံကို ဆေးထိုးအပ်လေးနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတာပါ။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ Signature လို့ပဲပြောရမလားပဲ။ ရေ
Promotion တွေလည်းပေးတတ်လို့ The Bar BurDubai page လေးကိုလည်း Like ကလေးတွေ၊ follow လေးတွေလုပ်ထားကြဦးနော်။
အဲလိုနေရာလေးမျိုးမှာ မွေးနေ့လုပ်လိုက်ရဖြင့် ဘယ်လောက်တောင်ပျော်စရာ
ကောင်းမလဲနော်.DJ တီးလုံးလေးကလည်းဖွင့်လို့။…ကဲပြောနေကြာတယ်…မွေးနေ့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သယ်ရင်းတွေနဲ့ chill ချင်တာဖြစ်ဖြစ် ခုပဲ Booking လုပ်ပြီးသွားလိုက်ကြရအောင်။ ဖုန်းက 09764622239.
PS : အမှန်က စားသောက်ဆိုင်ကညီမလေးကဖိတ်လို့သွားတာပါရှင့်။
ဈေးတော့ နဲနဲများသလိုဘဲ ။
ကန်စွန်းရွက်ကြော်တောင် ၄၀၀၀ ဆိုတော့ ။